तिलक तारामी रेशाली’, बुटवल-११, रुपन्देही
विरलै लाग्ने खग्रास सूर्य ग्रहणको दिन थियो । घाम लाग्दा लाग्दै अचानक पूरै अन्धकार भयो । जंगलतिर चर्न गएका बस्तुभाउ पनि बाँबाँ र बूँबूँ गर्दै घरतर्फ दौडिरहेका थिए । साथीहरू सँग खेल्न गएको हरि सरको कान्छो छोरो राजन पनि आत्तिदै घर आयो ।
‘बाबा ! आज यो के भएको ? दिउँसै यस्तो अँध्यारो ।’ राजनले सोध्यो ।
‘सूर्य ग्रहण लागेको हो, बाबू ।’ हरि सर बोले ।
‘सूर्य ग्रहण कसरी लाग्छ बाबा ?’ राजनले जिज्ञासु भएर सोध्यो ।
हरि सर विज्ञानकै शिक्षक थिए । उनले भन्न थाले, ‘पृथ्वीले सूर्यको र चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमा एउटै सरल रेखामा पर्दछन् । यही बेला जब सूर्य र पृथ्वीको बीचमा चन्द्रमा हुन्छ, चन्द्रमाको छाँया पृथ्वीमा पर्छ र सूर्य ग्रहण लाग्छ ।’
‘यो ग्रहण हटाउने कुनै उपाय छैन् बुबा ?’ राजनले हरि सँग सोध्यो ।
‘यो प्रकृतिलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन् बाबू । यो ग्रहण त क्षणीक हो । तीन चार घण्टा पछि आफै हटेर जान्छ । नडरा, डराउनु पर्दैन् ।’ हरि सरले भने ।
‘डराउनु पर्ने अरू ग्रहण पनि हुन्छन् र बुबा ?’ राजनले पुनः जिज्ञासा राख्यो ।
‘किन नहुनु ? हुन्छन् नि बाबु । हाम्रो देशको लागि भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो ग्रहण हो ।’ हरि सर बोले ।
‘यसले पनि सूर्यबाट आउने प्रकाश छेक्छ र बुबा ?’ राजनले अचम्म मान्दै सोध्यो ।
‘हैन बाबु, यसले सूर्यको प्रकाश त छेक्दैन् तर यसले हामी जनताले खाई नखाई करको रुपमा तिरेको राष्ट्रिय ढुकुटी स्वाहा पार्छ । देशको विकास चौतर्फी रोक्छ । जनताहरूले सधैंभर दुख पाउँछन् । सारा देश सधैं अन्धकार हुन्छ ।’ हरि सरले बेलिबिस्तार लगाए ।
राजन बुझेको भावमा मुन्टो हल्लाउँदै बोल्यो, ‘यो त सूर्य ग्रहण भन्दा पनि झनै खतरा पो हुने रहेछ । म मेरा जम्मै साथीहरूलाई पनि भन्छु । हामी सबै मिलेर यो ग्रहणलाई त जसरी पनि रोक्नुपर्छ है बाबा !’
लामो समय देखि रोगले थला परेर हस्पिटलमा भर्ना भई घरआएकी…
कथाः अक्टोपिक गर्भावस्था
जुम्ला साह्रै जाडो अनि सुविधाको अभाव भएको ठाउँमा अन्जनाको सानो…
लघु कथा : दुई बटुवाको कथा
हास्य व्यंग्य लघुकथा: हड्ताल
कथा: बेअर्थको साइनोहरू
नेपाली सेनाले माग्यो सिभिल कर्मचारी ४ दिन पहिले | संसार न्यूज़
ठूलो संख्यामा लोक सेवाको विज्ञापन ( हेर्नुस् यो सूचना) ७ दिन पहिले | संसार न्यूज़